ကုလားထိုင်များ – Ye Htut's Blog
Posted byye htut January 10, 2022 Posted inEssayTags:yehtutarticle
ဒီအက်ဆေးကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၃ ရက်နေ့မှာ ရေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က ရွေးကောက်ပွဲ နိုင် အင်န်အယ်လ်ဒီပါတီ ကို အစိုးရအဖွဲ့တာဝန်တွေ လွှဲပြောင်းပေးဖို့ ပြင်ဆင်နေချိန်ဖြစ်ပြီး ထိုင်ခုံ ပျောက်တော့မယ့်အခြေအနေကြောင့် သွေးလေ ချောက်ချားနေသူတွေ၊ ထိုင်ခုံ အသစ်အတွက် ခါးတောင်းကျိုက်ပြင်နေသူတွေကို ခံစား ရေးဖွဲ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာအဘိဓာန်တွင်တော့ ကုလားထိုင်ကို ခြေလေးချောင်းနှင့် အမှီပါသော ထိုင်ခုံ ဟု ဖွင့်ဆိုထားသည်။ ကျွန်တော့်အဖိုးကတော့ ငါတို့ဗမာတွေမှာ ကုလားထိုင်ဆိုတာမရှိဘူး၊ ကုလားဖြူတွေရောက်လာမှ ယူလာတာ။ ဒါ့ကြောင့် ကုလားထိုင်လို့ ခေါ်တာဟု ပြောဖူး သည်။ ဘယ်လိုပဲ ပြောပြော ကုလားထိုင် ဆိုတာက သာမန်ပရိဘောဂတစ်ခုလို့ ပြော လို့ ရသလို အခြေအနေတစ်ခု၊ အခွင့်အရေးတစ်ခုကို ပြသခြင်းဖြစ်သည်ဟုလည်း ဆိုနိုင် မည် ထင်သည်။
လွန်ခဲ့သော တစ်နှစ် ခွဲကျော်အချိန်က ညကြီးမိုးချုပ် အခန်းကျယ်ကြီးတစ်ခုထဲမှာ ကျွန် တော်တစ်ယောက်ထဲရှိနေခဲ့ဖူးသည်။ ဝန်ထမ်းတွေရုံးဆင်းသွားပြီးဖြစ်၍ တစ်ရုံးလုံးတိတ် ဆိတ်နေသည်။ တစ်ချက်တစ်ချက် ညတာဝန်ကျဝန်ထမ်းများရှိသည့်ဘက်က စကားပြော သံ သဲ့သဲ့လေးနဲ့ အခန်းထဲမှာ ဖွင့်ထားသည့်လေအေးစက်မှ လေတိုးသံသာ ကြားရသည်။ သည်အခန်းကြီးကအစိုးရရုံးတွေမှာတွေ့ရသည့်အစည်းအဝေးအခန်းကြီးဖြစ်သည်။ မဟော် ဂနီရောင် ယူပုံသဏ္ဍန် စားပွဲရှည်ကြီး၊ လက်တံ နှစ်ဘက်မှာ ကုလားထိုင်တွေတန်းစီ ချ ထားသည်။ယူပုံထိပ်မှာတော့ကုလားထိုင်တစ်လုံး။အခန်းထဲမှာ အကောင်းဆုံးနဲ့ ခန့်ငြား မှု အရှိဆုံးကုလားထိုင်ကစားပွဲထိပ်မှာနေရာယူထားသည်။ဒီကုလားထိုင်မှာ ရာထူး အကြီးဆုံး သူထိုင်မည်ဆိုတာ မြင်တာနှင့် သိနိုင်သည်။
လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်နှစ်ကျော် ဒီဝန်ကြီးဌာနကို ရောက်လာထဲက ဒီစားပွဲရှည်ကြီးမှာ ထိုင် ပြီး အစည်းအဝေးတွေ တက်ခဲ့ရသည်။ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရာထူးနဲ့ ကျွန်တော် တို့လိုလူတွေကအဝေးဆုံး၊အစွန်ဆုံးမှာ၊ပြီးရင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တွေ၊ ပြီးတော့ ဒုတိ ယ ဝန်ကြီးတွေ ရာထူးမြင့်လာလေ ထိပ်ဆုံးကုလားထိုင်နဲ့ နီးလေ။ ထိပ်ဆုံးမှာတော့ ဝန်ကြီး က ထိုင်ပြီး အစည်းအဝေးသဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ ကုလားထိုင်နေရာတွေက တာဝန်နဲ့ ရာထူးအဆင့်အတန်းကို ပြဆိုသည့် သဘောဖြစ်သည်။
အဲဒီအချိန်က အဲဒီကုလားထိုင်တွင် ထိုင်နေသည့် ကျွန်တော့်အတွက် ရွေးချယ်စရာ၊ ဖြစ်နိုင်စရာ အခြေအနေသုံးခုရှိသည်ဟု တွေးမိဖူးသည်။ ကျွန်တော့် တာဝန်ထမ်းဆောင်မှု ကို ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုမရှိရင် ဒီရာထူးနှင့်ပဲ ဆက်နေ၊ ဒီကုလားထိုင်မှာပဲ ဆက်ထိုင် ။ ဒါမှ မဟုတ် အပြစ်တစ်စုံတစ်ရာကျူးလွန်ခဲ့ရင် ကုလားထိုင်မှာထိုင်ခွင့်မရတော့ဘဲ အလုပ်က ထွက်ဖို့ဖြစ်သည်။နောက်အခြေအနေကတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုအပေါ်ကျေနပ်မှုလည်း ရှိ၊ ရာထူးနေရာလည်း လစ်လပ်ပြီးဆိုရင် ပိုမိုမြင့်မားသည့် ရာထူးသို့ တိုးမြှင့်ခန့်ထားခြင်း ခံရမည်။ ဒီလိုဆိုရင်တော့ စားပွဲထိပ်နှင့် ပိုနီးသည့် ကုလားထိုင်ကို ပြောင်းထိုင်ရမည်။
ဒီလိုနဲ့ ဝန်ကြီးဌာနအတွင်းမှာ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ဒုတိယဝန်ကြီး စသည်ဖြင့် ရာထူး တာဝန်အဆင့်ဆင့်ကို တိုးမြှင့်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရသည်။ ကုလားထိုင်တွေရွှေ့ထိုင်ခဲ့ရသည်။ ဒီနေ့မှာတော့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က ကျွန်တော့်ကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ် အတည်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တုန်းက ကျွန်တော့်ထိုင်ခဲ့သည့်နေရာနှင့် အဝေးဆုံးမှာ ရှိခဲ့သည့်ကုလားထိုင်မှာ ကျွန်တော်ထိုင်ရတော့မည်။ ပြီးခဲ့သည့် နှစ်တွေအတွင်းမှာ အစည်း အဝေးပေါင်းများစွာကို ဒီအခန်းထဲမှာ လုပ်ခဲ့သည်။ ထိပ်ဆုံးမှာထိုင်သည့် ဌာန အကြီးအကဲ များ၏ လုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေကို လေ့လာခွင့်ရခဲ့သည်။ နမူနာယူစရာတွေလည်း တွေ့ရ၊ မိမိစိတ်နှင့် မတူတာတွေလည်းမြင်ရ၊ သင်ခန်းစာကောင်းတွေလည်းရရှိခဲ့သည်။
အခုတော့ ထိပ်ဆုံးမှ ကုလားထိုင်မှာ ကျွန်တော်ထိုင်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချရတော့မည်။ ဒီကုလားထိုင်မှာတော့အရင်ကုလားထိုင်တွေနဲ့မတူတာက ကျွန်တော့်အတွက် ရွေးချယ် စရာ နှစ်ခုသာ ရှိတော့သည်။ အစိုးရအဖွဲ့သက်တမ်းကုန်သည်အထိ တာဝန်ဆက်လက် ထမ်းဆောင်ခြင်းနှင့် ကျွန်တော့်လုပ်ဆောင်မှုအမှားများကြောင့် အချိန်မတိုင်မီ ရာထူးမှ ထွက်ရခြင်း နှစ်ခု ပဲရှိသည်။ ဒီလိုစဉ်းစားလိုက်တော့ တာဝန်၏ ကြီးမားလေးပင်မှုကြောင့် လေအေးစက်ဖွင့် ထားသည့်တိုင် ကုလားထိုင်တစ်ခုလုံး ပူလောင်နေသလို ခံစားခဲ့ရ သည်။ကုလားထိုင် အပေါ်သာယာသည့်စိတ်မရှိတော့ နောင်ဒီကုလား ထိုင်မှာထိုင်ပြီး အစည်းအဝေးများစွာကို ဦးဆောင်သည့်အချိန်များတွင် ပထမဆုံးတာဝန်ယူ သည့် ညကခံစားချက်ကို မကြာ မကြာပြန်ပြောင်းသတိရမိသည်။ ထိုခံစားချက်နှင့်ပင် ကုလား ထိုင် ကြောင့် အပြုအမူ၊ အကျင့်အကြံ၊ ကိုယ်ကျင့်သီလတွေ ယိမ်းယိုင်မသွားအောင် ထိန်းသိမ်း ခဲ့ရသည်။
တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ ကုလားထိုင်တစ်လုံးသည် အဆောင်အယောင်၊ နောက်ပြီး သင်္ကေတ လက္ခဏာသဘောလည်းဆောင်ပြန်သည်။ လမ်းစဉ်ပါတီခေတ်ကဆိုလ ျှင် ပါတီဥက္ကဌကြီး ၏ ထိုင်ခုံကအခြားထိုင်ခုံတွေထက်မြှင့်ထားသည်။ဥက္ကဌကြီးနှင့် လွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ သည့် နိုင်ငံရေးသမားဟောင်းကြီးများ၊ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင်များ စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ရာတွင် ဥက္ကဌကြီးရဲ့ ကုလားထိုင်က မြင့်နေသည့်အတွက် အခြားသူများထက် ခေါင်းတစ်လုံးသာ နေသည်ကို မှတ်မိနေသေးသည်။ ဒီမှာတော့ ကုလားထိုင်က လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်ခြင်း အတူ တူ လက်ရှိအခြေအနေမှာ ဘယ်သူက ဘယ်နေရာမှာဆိုတာ သင်္ကေတဖြင့် ပြလိုက်ခြင်း ဟု ယူဆနိုင်ပြန်သည်။
တစ်ခါတစ်ရံကျတော့လည်း ကုလားထိုင်အမျိုးအစား ခန့်ညားမှုထက် ကုလားထိုင်ရှိနေ သည့် နေရာက အရေးကြီးနေပြန်သည်။ တစ်ချိန်သောအခါက ကျွန်တော်နှင့် သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ထိုခေတ်ကာလကရှားရှားပါးပါးပစ္စည်းတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရဖို့လေ ျှာက်လွှာ တင်ရန် အတွက် အခန်းတစ်ခန်းရဲ့အဝမှာ အချိန်အကြာကြီး စောင့်နေခဲ့ရဖူး သည်။ ဌာန အကြီးအကဲထံသို့တင်ပြရန်အတွက်သူ့ကိုယ်ရေးအရာရှိနှင့်အရင်တွေ့ရမည်။ထိုကိုယ်ရေး အရာရှိနှင့်တွေ့ဖို့အတွက် သူ့အခန်းဝက ယိုင်နဲ့နဲ့ ကုလားထိုင်တစ်လုံးပေါ် တွင် ထိုင် နေသည့် အပေါက်စောင့်ရုံးဝန်ထမ်းကို ခွင့်တောင်းရသည်။
ဒီအခန်းထဲကိုလေ ျှာက်လွှာကိုင်ပြီး ဝင်ခွင့်တောင်းသူပေါင်းများစွာကို မြင်ခဲ့ဖူးပြီဖြစ်သော ထိုဝန်ထမ်းက ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုမမှု၊ စောင့်ပါဟု တိုတိုပြတ်ပြတ်ပြော ပြီး လက် ထဲက စာအုပ်ကို ဆက်ဖတ်နေသည်။ ခုံတန်းလေးတစ်ခုပေါ်မှာ ကျွန်တော်တို့ အကြာ ကြီးထိုင်စောင့်နေခဲ့ရသည်။ ဟော သူနဲ့သိသူတွေလာရင်တော့ ချက်ခြင်း အခန်းထဲ သွင်း ပေးလိုက်သည်။ တစ်ချို့တွေကျပြန်တော့ ကျွန်တော်တို့လိုပဲ ထိုင်စောင့်ပေတော့။ ဒီနေရာ မှာတော့ဧည့်သည်ရဲ့ ရာထူးအဆင့်အတန်းက အရေးမကြီး၊ ကုလားထိုင်ကောင်း မကောင်း ကလည်း အရေးမပါ။ ကုလားထိုင်ရှိနေသည့် နေရာက အရေးကြီးသွား ပြန်သည်။
ကုလားထိုင်တွေအရေးပါတော့ ကုလားထိုင်လုသည့် ကစားနည်းတွေလည်းရှိလာသည်။ ငယ်ငယ်တုန်းက ကစားခဲ့ရသည့် Musical Chair ဆိုသည့် ကစားနည်းမှာတော့ ပါဝင် ကစားသူအရေအတွက်ထက် ကုလားထိုင်တစ်လုံးလေ ျှာ့ပြီးနေရာချထားသည်။ လူဆယ်ဦး ဆိုရင် ကုလားထိုင်က ကိုးလုံးပဲ ရှိသည်။ သီချင်းစဖွင့်သည်နှင့် ကစားသူတွေက ကုလား ထိုင်တွေကို ပတ်ပြီး စက်ဝိုင်းပုံလေ ျှာက်နေရသည်။ သီချင်းရပ်သည်နှင့် အနီးဆုံးကုလား ထိုင်တစ်လုံးကို ဝင်ထိုင်ရသည်။ ကုလားထိုင်မရသူက အရှုံးသမား၊ အထုတ်ခံရမည်။
နောက်တစ်ချီပြန်ကစားသည့်အခါ ကုလားထိုင်တစ်လုံးထပ်လေ ျှာ့လိုက်သည်။ ဒီလိုနဲ့ နောက်ဆုံးကျန်သည့် ကုလားထိုင်တစ်လုံးကို ထိုင်နိုင်သူက ဒီကစားပွဲမှာ အနိုင်ရသူဖြစ် သည်။ ဒီကစားနည်းမှာတော့ သီချင်းသံက ဘယ်အချိန်ရပ်မည်မသိ၊ သီချင်းဖွင့်ချိန် ကြာ လာသည်နှင့်အမ ျှ ပါဝင်ကစားသူတွေ ဂဏှာမငြိမ်ဖြစ်လာသည်။ ရုတ်တရက် သီချင်းသံ ရပ်သွားသည်နှင့် အနီးဆုံးထိုင်ခုံကိုပြေးထိုင်၊ နှစ်ယောက်ဆုံနေလ ျှင် တွန်းတိုက်ပြီး လုထိုင်ကြပြန်သည်။ ကစားပွဲရှည်ကြာလာလေ၊ ကုလားထိုင်တွေနည်းလာလေ ပြိုင်ဆိုင်မှု တွေက ပြင်းထန်လာလေ။ ကုလားထိုင်ရလိုက်သူတွေပြုံးပျော်နေပေမယ့် နေရာမရလို့ ထွက်သွားရသူက မပျော်နိုင်၊တစ်ခါတစ်လေ သူနဲ့ နေရာအပြိုင်လုခဲ့သူကိုပင် မကျေနပ် သည့် ကိုယ်နှုတ်အမူအရာနှင့်တုန့်ပြန်တတ်သည်။
ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ ပျော်ရွှင်မှုထက် အနိုင်မရသဖြင့် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော လောဘ စိတ်၊ ဒေါသစိတ်တွေက ပိုများခဲ့တာ အသေအချာပဲဖြစ်သည်။ အာဂျင်တီးနား အာဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ် ကြီးပီရွန်ရဲ့ ဇနီး အီဗာပီရွန်အကြောင်းတင်ဆက်သည့် တေးသံစုံပြဇာတ် Evita မှာ ဗိုလ် ချုပ်ကြီးပီရွန် အာဏာရလာပုံကို ပီရွန်နဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် အရာရှိတွေ ငယ်စဉ်က Musical Chair ကစားကြပုံ၊ နောက်ဆုံး ပီရွန်တစ်ယောက်ပဲ ကျန်ခဲ့ပုံနှင့် နှိုင်းယှဉ်တင် ဆက်ခဲ့သည့်အကြောင်းကို ဖတ်ရတော့ ဒီကစားနည်းက နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်က ကုလားထိုင် လုပွဲတွေကို ကြည့်ပြီး တီထွင်ခဲ့သလားဟု တွေးမိပြန်သည်။
ဒီလိုနဲ့ ကုလားထိုင်တွေအကြောင်း မြင်မိ၊တွေးမိတာ နှစ်နှစ်နီးပါးရှိတော့မည်။ နိုင်ငံ့ ဝန်ထမ်းဘဝနှင့်ရော နိုင်ငံရေးအရခန့်အပ်သောရာထူးနှင့်ပါ တာဝန်အဆင့်ဆင့်ကို ဆယ်စု နှစ်သုံးခုကျော် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီ။ ကုလားထိုင်လုသူ၊ မိမိ နေရာမရသဖြင့် လောဘ၊ ဒေါသ၊ မာန်မာနများနှင့်ပူလောင်နေသူ၊မုဒိတာမပွားနိုင်ပဲထိုင်နေသူကိုဒုက္ခအမျိုးမျိုးပေးဖို့ ကြိုးစား သူ၊ကုလားထိုင်ကြောင့်ဖောက်ပြန်သွားသူစသည် စသည်တို့ကို မြင်ခဲ့၊ ကြားခဲ့၊ သင်ခန်းစာ ရခဲ့ပြီးပြီ။ ကိုယ်တိုင်လည်း ကုလားထိုင်ကြောင့် မပျက်စီးရအောင် ကြိုးစားခဲ့သလို လောကီ သားပေမို့ ကတိမ်းကပါးဖြစ်ခဲ့တာလည်း ရှိသည်။ ကုလားထိုင်တွေဘယ်လိုပြောင်းပြောင်း ကိုယ်ကျင့်သီလခိုင်မြဲစွာမဖောက်မပြန်နေခဲ့သူများကိုလည်းတွေ့မြင်ခဲ့ရ၊ကြည်ညို လေးစားခဲ့ရသည်။ ကုလားထိုင်တစ်လုံးရဖို့အတွက် နောက်ကြောကို ဓားနှင့် ထိုးဖို့ ကြိုး စားသူတွေ၊ ဘာလုပ်ရလုပ်ရ ထိုင်ရဖို့ အဓိက ဆိုသူတွေကို မြင်ပြီး စက်ဆုပ်ခဲ့ဖူးပြီ။
မကြာသောကာလမှာ လက်ရှိတာဝန်ကနေ အနားယူရမည်။ ကုလားထိုင်ပြောင်းရဦးမည် ပေါ့။ ဒီတစ်ခါထိုင်ရမည့် ကုလားထိုင်ကတော့ မိသားစု ထမင်းဝိုင်းက ကုလားထိုင်ပဲဖြစ် မည်။ ဒီကုလားထိုင်လေးမှာတော့ ကြုံခဲ့ရ၊ မြင်ခဲ့ရသည့် ကုလားထိုင်များလို ပူပန်မှုတွေ၊ ဖိစီးမှု တွေ၊ တာဝန်တွေနဲ့ တွဲမနေ၊ ချစ်ခြင်းတရားတွေ၊ကြင်နာခြင်းတွေနဲ့ အေးမြနေမှာ သေချာသည်။
2 thoughts on “ကုလားထိုင်များ”
Speaking of chairs, MAL is behaving like Than Shwe and Ne Win. Look at his chair and the chairs other people are sitting:
တနင်္သာရီတိုင်းတွင် သယံဇာတများ ထုတ်ရန် လုပ်ငန်းရှင်များ ခေါ်ရမည်ဟု စစ်ခေါင်းဆောင်ပြော #mizzimanews pic.twitter.com/18S1nrOlTk
— Mizzima News (@MizzimaNews) January 14, 2022
I think he will follow their fate inadecade or two from now. Maybe even haveafuneral like Ne Win’s.
This photo is classic 90 era. The posture of the guy standing in addressing MAL. With this kind of policy and management style, I predict that instead of electric train and clean environment, we are likely going to face another environmental disaster just like during Than Shwe era again.
တနင်္သာရီတိုင်းတွင် သယံဇာတများ ထုတ်ရန် လုပ်ငန်းရှင်များ ခေါ်ရမည်ဟု စစ်ခေါင်းဆောင်ပြော
Mizzima News (@MizzimaNews) January 14, 2022